Saaxil vs Awdal: Finalka Maanta Iyo Kalmadda Xasan Waraabe-cadde
HomeWararka MaantaSaaxil vs Awdal: Finalka Maanta Iyo Kalmadda Xasan Waraabe-cadde
Maanta waxa la soo gebogebayn doonaa ciyaaraha Gobollada Somaliland oo muddo laba toddobaad ah ka socday garoonka Hargeysa Stadium oo kubbadda cagta ay ku ciyaarayeen siddeed gobol oo ka mid ah 14ka gobol ee Somaliland, halka garoonka Timacadde ay siddeed gobol oo kubadda kolayga ahi xalay ku kala calaf-qaadeen.
Kulanka maanta oo dhex mari doona Saaxil iyo Awdal oo isugu soo hadhay ciyaarta kama dambaysta ah markii ay ka soo kala badiyeen Daad-madheedh iyo Gabiley, ayaa ah markii koowaad ee labadan gobol ay isugu yimaaddaan marxaladdan oo kale.
Gobolka Awdal sannadkii 2007 ayuu ciyaarta ugu dambaysa ee faynalka gaadhay hase yeeshee muu calfanin, halka xulka Saaxil ay tahay markii ugu horreysay ee ay faynalka gaadhaan.
Kalmadda Xasan Waraabe-cadde
Khabiirka ciyaaraha ee Xasan Waraabe-cadde oo la hadlay shabakadda ciyaaraha ee CADALOOL, ayaa farriin dardaaran ah u jeediyey ciyaartoyga labada gobol, taageereyaasha iyo shacabka reer Hargeysa.
Xasan waraabe-cadde waxa uu sheegay in ciyaartan ay tahay mid muhiimad gaar ah u leh labada xul gobol, ayna tahay in ciyaartoygu ay si kalsooni iyo akhlaaq leh u wada ciyaaraan, gaar ahaan in ay isku hanneeyaan guusha kooxda laga badiyaana ay ogolaato guul-darrada, maadaama laba qof oo tartamay ay mid uun guushu raacayso.
Khabiir Xasan waxa uu usoo jeediyey taageereyaasha labada xul gobol in ay si fiican oo walaaltinimo leh isu gacan qaadaan, una muujiyaan in ay yihiin shacabkii Somaliland, kubbadduna tahay madadaalo.
Isagoo si gaar ah ula hadlaya shacabka caasimadda Hargeysa ee martida loo yahay, waxa uu yidhi: “Reer Hargeysa waa inay si fiican usoo dhoweeyaan ciyaartoyga labada gobol, kana shaqeeyaan amniga iyagoo muujinaya bisaylkooda”
Newcastle Oo Halis Ugu Jirta Inay Kusoo Noqon Kari Weydo Premier League, Kaddib Guul-darrooyin Iskugu Xig-xigay
17/04/2017 Abdiwahab Ahmed
Gudoomiyaha Atletico Madrid Cerezo:- Heshiiska Griezmann Ayaa Ka Fiican Ka James Rodriguez
Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko – Feedhka Dunidu Sugayso Ee Caawa
29/04/2017 Abdiwahab Ahmed